तपाईंले कुनै पसलेकहाँ गएर सरसमान खरिद गरेपछि के उनले तपाईंलाई ‘सेवा सुल्क’ भन्दै अतिरिक्त पैसा माग्छ ?
कुनै किसानबाट सागसब्जी किनिरहँदा उनले तपाईंबाट आफ्नो उत्पादन बाहेकको पैसा असुल्छ ?
यो शुल्क ग्राहकले रेष्टुरेन्टमा खाए बापतको शुल्क हो । कुनैपनि बस्तु तथा सेवाको अन्तिम उपभोगमा लाग्ने कर हो भ्याट । त्यसमा अतिरिक्त लिनुको कुनै आवश्यकता छैन । त्यो मेनुमा लिइने शुल्कमा नै समेटिएको हुन्छ । त्यस्तै, खाना पु¥याउन आएबापत लिइने शुल्क हो सेवा शुल्क । यी दुई शीर्षकका शुल्कहरु काठमाडौंका धेरै रेष्टुरेन्टमा गएबापत ग्राहकले तिरेका अतिरिक्त शुल्कहरु हुन् । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा जाने ग्राहकहरुले खुशी भएर दिने अतिरिक्त शुल्कलाई सेवाशुल्क कानूनी कि गैरकानूनी भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
यदि सरकारले खानेकुराको गणस्तर र मात्रा निर्धारण गर्ने र त्यही अनुरुपको मूल्य तोकिदिने हो भने फरक कुरा । तर, आफुखुसी खानेकुरा बनाउने, आफुखुसी मूल्य तोक्ने र आफुखुसी सेवाशुल्क र भ्याट लिने प्रवृत्ति कति न्यायोचित होला ?